Grain bokusebenzisa Abrasive
Green Silicon khabhayithi
Glassfibre plates baxhaswa
Guqula Buttons oluKhawulezayo
Zokuluka for caba Wheels
Vitrified Ukusila Wheels
Umphezulu Ukusila ne zezindlu Ukusila
Wotho Gear Ukusila
Gear Form Ukusila
Resin-yesondo Ukusila Wheels & Sika-off Wheels
amavili Ukusila ngqo Bolt-up
Ezo zihlatywa ngaphantsi kwesikhumba ngenaliti Ukusila
Depressed Center Ukusila Wheels
Okuye kwabethelelwa Wheels Sika-off
Wheels ezinkulu Nqumlani-off
amavili ngqo ukusika
Velcro Akwazi & Akwazi PSA
Vulcanized Fiber Akwazi
Abrasive ilula Block
imfuneko imveliso ezahlukeneyo evela kwisithuba kwimveliso ezahlukeneyo. ngokubanzi, kuba imveliso ngobuninzi, ixesha phambili ziintsuku 20-45 emva kokufumana oder. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu ukhokelo azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Ewe, sisoloko ukusebenzisa kwizinga eliphezulu kumazwe ukuphakheja. Pallets isoloko isetyenziselwa uninzi imveliso yethu. zokubopha zeengcali kunye neemfuno ivale non-esezantsi kungaba kukho intlawulo eyongezelelweyo.
Lwedilesi: 18C Tianzhi Building, NO.63 eBeijing Rd, Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, China.
Ukuba unemibuzo malunga iimveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala kungekudala.